Ukuze kwesisindo izinjongo, ukuqunjelwa eside futhi disbakteroze Kunconywa ukubeka i enema. Le nqubo siyasebenza kakhulu, kodwa kudingeka wazi indlela yokwenza i enema ekhaya. Futhi lokhu okudingayo ethile nakho. Futhi ngaphambi kokuba uqale, ukufunda izincwadi ezikhuluma ngale ndaba, noma (okungcono) cela Council Rights, okuyinto has a degree wezokwelapha. Angakutshela ngqo ukuthi ukwenza i enema ekhaya.
Amanye awo yilawa:
- appendicitis acute;
- esiswini emathunjini bese hemorrhoidal ukopha;
- volvulus ;
- ubuhlungu besisu;
- ukuvuvukala noma ukuvuvukala kule ingquza noma ingemuva.
Uma ungenayo abe nokuhlangenwe nakho okunjalo futhi awazi indlela yokwenza i enema ekhaya, ukuthenga mug Esmarch. Le yidivayisi elula kunazo afeze yokuhlanza izinqubo yasekhaya. Izingxenye zalo ingxenye: iraba, ibhodlela le plastic akuvamile enamathiselwe ngamapayipi obukhulu kodwa nezimo, ubude engesiyo ngaphansi kuka 1.5 amamitha. Le kit sihlanganisa iqoqo plastic ezikhethekile noma ingilazi ithiphu. Kwihendisethi kuyinto empompini olawula ukunikezelwa uketshezi.
Ngaphambi wenze enema, kufanele siqiniseke ukuthi ichopho esetshenziswa nakanjani bushelelezi. Ngoba kungenjalo kungayilimaza. Ngemva kokusebenza ne enema kuqedile, kubalulekile ukuba nithele ithiphu.
Ngokuvamile, capacitance Esmarch mug kuyinto eyodwa kuya amalitha amabili nesigamu. Odokotela batusa Ukuqala iqondiswa 500 ml, bese nge okwandisa imali inqubo ngamunye.
Manje chaza yonke inqubo lokhu zokukhwabanisa. Ngakho ukubophela douches mug ezingeni ukuphakama kwamamitha mayelana 1.5, pre-ukugcwalisa nge uketshezi. Ukuze wenze lokhu amanzi ngokuvamile sebenzisa abilisiwe noma kahle ixazululwe. Qiniseka ukuhlola lokushisa wakhe, kufanele kube kancane ephakeme kunaleyo igumbi.
Lapho amanzi cishe elilingana nezinga lokushisa komzimba womuntu, lwenza e emathunjini bese hhayi ziyancipha. Akunakusetshenziswa akudingeki ukusebenzisa amanzi ashisayo. Ukuze uthuthukise umphumela sinezela uketshezi esincane kalamula noma beetroot.
Kanjani ukwenza i enema ekhaya, ukuthi inqubo kwaba nomphumela? Kubaluleke kakhulu lapha ngokufanele akhethwa isikhathi. Ideal - ekuseni (amahora 5-7), noma ebusuku (amahora 8-9). Vele zalezikhathi umzimba kakhulu silungiselelwe ukuthi uhlanzekile.
A nomthelela omkhulu kakhulu ku-ikhwalithi yale zokukhwabanisa kuthinta imvelo nasemkhathini. Kuhle yokugezela. Kube ngokuqinisekile ngeke kube yindlela eyodwa. Advance ukuya ethoyilethi. Cover phansi nge oilcloth izakhiwo.
Ukuze wenze kahle i enema, kumele ulale ngohlangothi lwakho ohlangothini lwesobunxele futhi ukudonsa ngamadolo ukuze esiswini. Enye: thatha isikhundla emadolweni indololwane. Manje gcoba nge ithiphu ukhilimu, futhi ngokucophelela njengoba kungenzeka, uyifake ku le ingquza. Khona-ke ukuvula impompi ake ketshezi. Ngempela ulungise iphimbo layo.
Uma ngokungazelelwe uhlangabezana ukungakhululeki, ukuyeka umsebenzi bese uthatha umoya ambalwa ezijulile. Ngemva kwalokhu, uqhubeke inqubo. Lapho bonke liquid kwethulwa, ukudonsa ichopho bese uzama ukugcina uketshezi esiswini okungenani angu-10. Abalona izinguquko ezidingekayo kuleli cala.
Uma udinga waphinda wenze enema, qiniseka ulinde okungenani amaminithi 40 futhi wenze isiqiniseko sokuthi zonke ketshezi kuthululwe ukuthola indlela yokuphuma kwamathumbu. Ngokusho iseluleko ochwepheshe, kungcono kabusha ukwenza i enema ngesikhathi wokuhlanza nezinqubo. Kulokhu, amanzi kungenziwa wanezela umhluzi chamomile, okuyinto has umphumela elwa namagciwane kanye opholile.
Ngisho ukuthola indlela yokwenza i enema ekhaya, ngeke ahluleke ubuze kudokotela onolwazi oluthé. Phela, wayehawukela uqoka izinqubo ezidingekayo ngesisekelo ukuhlolwa okwenziwa.
Kufanele bazi ukuthi kufanele ihlolwe sama-hormone egilo. Inani ukuhlaziywa sama-hormone egilo
Indlela ukushintsha idrayivu kanzima laptop: A Kwesiqondiso Esiwusizo
"Amoxicillin" ikati: yokusetshenziswa
Delictual - ikhono ukuthatha zibhekane nemiphumela yezenzo zazo. delictual yokuqondisa